Umthandazo wokucela umsebenzi Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
Umthandazo wokucela umsebenzi
Kuthi sonke, ngexesha elithile ebomini bethu, ixesha elinzima mali liza. Abanye bagcina imisebenzi yabo, nangona oko bakufumanayo kungasanele; abanye baphulukana nemisebenzi kwaye batyiwa luxinzelelo kunye nokuphelelwa lithemba ngenxa yamatyala angahlawulwanga. Ukuba uhamba kwimeko embi kwaye ufuna umsebenzi, themba uThixo inkosi yethu kwaye wenze Umthandazo wokucela umsebenzi njengoko sikubonisa apha.
1 Umthandazo wokucela umsebenzi, uthembele kuThixo
2 Ukubaluleka kokuthandaza
3 Indlela yokuthandaza?
Umthandazo wokucela umsebenzi, uthembele kuThixo
Ukuba uneengxaki ebomini bakho, akukho nto ilunge ngaphezu kokuthembela kuThixo, umdali wethu. Emva koko, akaze abashiye abantwana bakhe. Ukuba awufumani msebenzi ukubonelela ngento oyifunayo okanye uyifunayo, thandaza ngokholo. Apha sikushiya isivakalisi esilandelayo:
“Tata othandekayo waseZulwini, egameni likaYesu, ndifuna ubulumko bakho kwaye ndikuthembe ukuba undikhokelele ekufumaneni umsebenzi ondilungeleyo. Ukususela ngoku ndifuna ukuhamba phantsi kwenceba yakho nenyaniso kwaye, ngaphandle kokuguqa kwiminqweno yam kunye nokuqonda okungaphezulu.
Ndincede ndifumane umsebenzi olungileyo apho, ngezandla zam, akukho nto isilelayo kum okanye eyam. Andizukukhathazeka okanye ndixhalele nantoni na, Bawo, kuba ndiziva uxolo lwakho luza entliziyweni yam nasengqondweni yam.
Ungumthombo wamanzi aphilayo, ndinentembelo kulungiselelo lwakho ondinike lona amandla ukumelana namahla ndinyuka obomi bam imihla ngemihla. Ndiyabulela kuwe, Bawo, ngokundinika isidingo somsebenzi ngokobutyebi bakho nozuko lweNkosi yethu.
Owu Thixo wam, ngamana amandla akho angaba nam namhlanje ukufumana umsebenzi. Ndikhokele kulo msebenzi ndiya kuwuthanda kwaye ndiwuxabise ngomphefumlo wam wonke. Ndikhokelele kwindawo enendawo enembeko nentsebenziswano, kwindawo ekhuselekileyo neyonwabileyo. Ndincede ndifumane ukulingana kwengqondo kunye nokomoya kuloo msebenzi mtsha undigcinele wona.
Ndiyabulela Nkosi ngokundimamela nangokundinceda namhlanje. Ubomi abuhlali bulula, kodwa ndiza kuzama ukukhumbula ukuba uhlala usoloko ukundinceda ngalo lonke ixesha lobomi bam. Ungowokubongwa, Nkosi, Malibongwe igama lakho elingcwele.
Ubunzima ebomini bethu ngamanye amaxesha busenza sizive soyisiwe. Ngenxa yoku, ngamanye amaxesha sicinga ukuba uThixo akasincedi, ukuba le nto sihamba kuyo ayilunganga. Siyakholelwa ukuba, njengoko siphepha kangangoko ukwenzakalisa abo basingqongileyo, silungile kwaye asifanelanga ukuba kwenzeka ntoni kuthi. Oku kunokuba yinyani, kodwa uThixo akasishiyi ngokwenene.
UThixo akabalibali abantwana bakhe, abo wabadala ngokomfanekiso wakhe nangokufana naye. Nangona kunjalo, okungafaniyo kuyinyani: indalo yakhe iyamlibala, nokuba umgwebe. Xa sihamba namaxesha amabi, kufuneka sikhumbule ukuba uThixo uya kuhlala enathi. Nangona abanye bema ngelithi, ayinguye osibeka kwiimeko ezingathandekiyo, kodwa yintando yakhe ukuyiphepha.
Kule nto sele ikhankanyiwe, kubalulekile ukuba ungazahluli kuThixo. Ubunzima bunokuchaphazela ukuzinikela kwethu, ukholo lwethu, kodwa akufuneki sikuvumele oko ukuba kufinyelele kwinqanaba eliphezulu. Ukugcina unxibelelwano noThixo kukugcina umoya wethu ucocekile, kukuthembela kwiintsikelelo zakhe kunye nenkuselo yakhe.
Apha umthandazo ubalulekile, kuba yinto eyalelwe ukuba yenziwe, ngunyana wakhe, uYesu. Ukungathandazi kufana nokuxelela uThixo ukuba asiyidingi. Singafumana ubutyebi ngaphandle kukaThixo, sinokuba namandla, singaphumelela, nantoni na ngaphandle kwakhe. Kodwa masingalibali ukuba asinayo intsikelelo yakhe, okanye ukukhuselwa kwakhe, siya kuba sizingca.
Ukuba uneshishini kwaye ufuna ukuthandazela ukukhula kwalo kunye nekamva lezoqoqosho, unokuba nomdla wokufunda umthandazo kuMateyu oNgcwele.
UYesu, abapostile, abadumisi, abaprofeti, bonke bayalela ukuba kuthandazwe. Umthandazo unjengegazi lomoya wethu. Siyazibuza ukuba kutheni el mundo Itshintshe kakhulu, kakubi, kutheni kukho uxinzelelo olungaka, uxinzelelo olukhulu, uxinzelelo kwaye ngenxa yoku, izifo. Uninzi lwamaKatolika, amaKristu kunye nabanye, kodwa baninzi abo bashiya uThixo ngokwabo. Lowo uthandazayo akoni; ke othe wona akathandazi. Unyango lwexhala noxinzelelo kukuthembela kuThixo, thandazela ukugcina unxibelelwano naye.
Ukuthandazela, hayi ukufumana nje umsebenzi kodwa nantoni na, into yokuqala lukholo. Yiba nokholo kunye neenjongo ezilungileyo. Asiceli ukuba siqokelele ubutyebi obuninzi okanye sifumane oko sikulangazelelayo, ngokwabantu ngabanye. Siyacela ukuba sibe nakho oko sikufunayo, ngokwaneleyo ukuze sikwazi ukuhlawula amatyala, sikwazi ukubonelela izalamane zethu, ukuba sibe nenqanaba lobomi elifanelekileyo. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, mayibe kukufezekisa ukuthanda kukaThixo, ngeenjongo asinike zona.
Ukuze imithandazo isebenze, kubalulekile kungekuphela ukuyenza ngokusuka entliziyweni, kodwa nokunyanzelisa. Njengoko uYesu watshoyo kumzekeliso ngomhlobo ongamkelekanga:
"Masithi omnye wenu unomhlobo aze ajike kuye ezinzulwini zobusuku athi:" Mfondini, ndiboleke izonka ezithathu, kuba omnye wabahlobo bam ufikile kuhambo kwaye andinanto ndingamnika yona ", kwaye ngaphakathi uyaphendula:" Ungandikhathazi; ngoku luvaliwe ucango, nabantwana bam sesilele; Andikwazi ukuphakama ndikunike. Ndiyakuqinisekisa ukuba nokuba akavuki akunike kuba ingumhlobo wakho, uyokuvuka ubuncinci ngenxa yokunyanzelisa kwakho kwaye uya kukunika yonke into oyifunayo. Inene ndithi kuni, Celani, nophiwa; funani, nofumana, nkqonkqozani, novulelwa. Kuba lowo ucelayo, uyazuza; Ukuba ukhangela uza kufumana; nalowo ubizayo uya kuvulelwa. (Luka 11, 5, 10)
Ngendlela efanayo naleyo uYesu athi masicele ukwamkela, kufuneka sithandaze ngokholo kwaye sinyanzelise uncedo lukaThixo. Oku ngaphandle kokulibala ukuba, ukongeza, kufuneka sibe nesimo esifanelekileyo kwaye sinyanzelise ukukhangela esikudingayo.
Umthandazo wokuphakamisa umphefumlo womntu oswelekileyo